Dowladda oo Shir dib u heshiisiin ah ka furtey Muqdisho – Radio Baidoa
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta oo horay u diyaarisay Hanaanka dhab u heshiinta qaran kalana tashatay guud ahaan dowlad goboleedyada dalka iyo Maamulka Gobolka Banadir ayaaa bilaabaysa wajigii labaad ee ah Daadajinta Hanaanka oo la doonayo in lugu gaarsiiyo ilaa heer degmo.
Daadajintan ayaa ujeedkeedu yahay in dhamaan dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir ay yeeshaan hanaan dhab u heshiin u gaar ah kaas oo waafaqsan kana turjamaya Hanaanka Qaran ee Dhab u heshiinta Soomaaliyeed.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ayaa ka caawinaysa dhamaan dowladaha xubnaha ka ah dowlada Federaalka iyo gobolka banaadir sidii ay u dajin lahaayeen hanaanka dhab u heshiinta heer dowlad goboleed.
Kulanka Soo-bandhigidda Hannaanka Dhab-u-heshiinta Qaran (HDQ) iyo Dejinta Qorshaha Dhab-u-heshiinta Gobolka Banaadir ayaa u jeed kiisu yahay sidii wasaaradda arrimaha, federalka iyo dib u heshiinta uga caawin lahayd Maamulka gobolka banaadir dajinta hanaanka dhab u heshiinta.
Kulankan oo muhiimad gaar ah u leh maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka soo qeyb galay dhamaan qeybaha kala duwan ee gobolka banaandir oo ay ka mid yihiin maamulada degmooyinka gobolka banaadir ku waas oo uu hanaankani sida tooska ah u saamyn doono.
Kulankan oo socon doono mudo laba maalin ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa hanaankii loo maray diyaarinta Hanaanka Qaran ee dhab u heshiint ayadoona la doonaya in maamulka gobolka banaadir uu ka qaato waayo aragnimo iyo qib rad ku aadan sidii uu u diyaarin lahaa hanaanka dhab u heshiinta Gobolka Banaadir kaas oo waafaqsan Hanaanka qaran ee Dhab u heshiinta.
Dowladda & Hay’adaha UN-ka Shir u dhaxeeya oo Muqdisho ka furmay